Mpanamboatra sy mpamatsy L-Cysteine ​​any Sina | Boyu
Alatsinainy-alahady: 24 ora
Additives amin'ny famahanana
Zezika asidra amino
No. CAS: 52-90-4
Formula Molecular: C3H7NO2S
Milanja molekular: 121.16
EINECS NO: 200-158-2
Fonosana: 25KG / amponga
Fitsipika momba ny kalitao: AJI
Mampiavaka: Kristaly fotsy na vovoka kristaly
zavatra fepetra arahana
Fanodinana manokana [a]D20° + 8.3 ° ~ + 9.5 °
State of solution (Transmittance) ≥95.0%
Fahaverezan'ny maina ≤0,50%
Residue amin'ny ignition ≤0,10%
Metaly mavesatra (Pb) ≤10PPM
Chloride (Cl) ≤0.04%
Arsenika (As2O3) ≤1PPM
Vy (Fe) ≤10PPM
Amoniaka (NH4) ≤0.02%
Sulfate (SO4) ≤0,030%
Asidra amine hafa Chromatographically
sanda pH 4.5 ～ 5.5
sahy miteny 98.0% ～ 101.0%
Mampiasa: Ampiasaina amin'ny fanafody, sakafo, kosmetika, fikarohana biokimika, sns.
1.Ny vokatra dia misy fiantraikany amin'ny detoxification ary azo ampiasaina amin'ny fanapoizinana acrylonitrile sy asidra manitra. Ity vokatra ity koa dia misy fiantraikany amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny taratra amin'ny vatan'olombelona. Izy io koa dia fanafody ho an'ny fitsaboana ny brigitis, indrindra fa toy ny fanafody phlegm (ampiasaina amin'ny endrika acetyl L-cysteine ​​methyl ester).
2.Amin'ny resaka sakafo dia ampiasaina amin'ny mofo izy io hampiroboroboana ny gluten, hampiroborobo ny fermentation, ny famoahana ny bobongolo ary hisorohana ny fahanterana. Ampiasaina amin'ny ranom-boankazo voajanahary mba hisorohana ny fihanaky ny otrikaina C ary hisorohana ny ranom-boankazo tsy ho tonga volontany. Natao ho toy ny stabilizer ho an'ny vovo-dronono, ary otrikaina ho an'ny sakafon'ny biby fiompy sns.
3. Amin'ny kosmetika dia azo ampiasaina ho akora ilaina amin'ny fanaingoana tarehy tarehy sy fandokoana volo tsy misy poizina ary vokarina ary fanomanana perm. Izy io dia mitazona ny asan'ny anzima sulfhydryl manan-danja amin'ny famokarana keratin ny proteinina amin'ny hoditra, ary manampy ny vondrona solifara hitazomana ny metabolisma ara-dalàna ao amin'ny hoditra ary mifehy ny melanin-tsolika vokarin'ny sela pigment amin'ny sosona farany ambany amin'ny épermermis. Izy io dia kosmetika fanadiovana voajanahary tena mety. Izy io dia afaka manala ny melanin'ilay hoditra mihitsy, manova ny natioran'ny hoditra, ary mahatonga ny hoditra ho fotsy kokoa.
Voatahiry:amin'ny toerana maina sy madio ary misy rivotra. Mba hisorohana ny fandotoana dia voarara ny mametraka an'io vokatra io miaraka amin'ny fanafody misy poizina na manimba. Mandritra ny roa taona no faran'ny daty.
F1: Inona ny fahafahan'ny famokarana totalin'ny orinasanao?
A1: 2000 taonina ny fahaizan'ny asidra amino.
F2: Firy ny orinasanao?
A2: Mirefy 30 000 metatra toradroa ny velarany
F3: Inona ny fitaovam-pitsapana anananao?
A3: Mizana mandanjalanja, lafaoro fanamainana eo amin'ny mari-pana, Acidomèter, Polarimetre, Fandroana rano, lafaoro Muffle, Centrifuge, Grinder, fitaovana famaritana Nitrogen, mikraoskaopy.
F4: Azo zahana ve ny vokatrao?
A4: Ie. Ny vokatra fahasamihafana dia misy karazany maromaro, ny santionany dia tazonina mandritra ny roa taona.
F5: Mandra-pahoviana ny vanim-potoanan'ny vokatrao?
A5: Tow taona.
Teo aloha: N-Acetyl-L-Cysteine
Manaraka: L-Cysteine ​​Hydrochloride Anhydrous
L-Cysteine ​​Hydrochloride Anhydrous
Hebei Boyu Biotechnology Co., Ltd.